Fijerena fotoana - Plugin hidirana amin'ny sary zanabolana manan-tantara amin'ny AutoCAD
Timeviews dia plugin iray mahaliana indrindra izay mamela ny fidirana amin'ny sary zanabolana manan-tantara avy amin'ny AutoCAD, amin'ny daty sy fanapahan-kevitra samihafa. Manana ny maodely contour nomerika nakariko avy amin'ny Google Earth, izao dia te-hijery sary manan-tantara amin'ity faritra ity aho. 1. Safidio ny faritra mahaliana. Tsotra ny fizotrany. Ny ...
Transoft Solutions Inc., mpitarika manerantany amin'ny famolavolana sy ny rindrambaiko fandinihana injeniera momba ny fitaterana, dia niara-niasa tamin'i Plexscape, mpamolavola Plex.Earth®, iray amin'ireo fitaovana malaza indrindra ho an'ny AutoCAD amin'ny fanafainganana ny tetik'asa, ny injeniera ary ny asa fananganana. (AEC). Singa iray ifotoran'ny fiaraha-miasa ny fampidirana ny haitao AutoTURN®…
Toa tsy toa izany, fa ny loharano namboarin'i PlexScape Web Services hanovana koordinativa sy hanehoana azy ireo amin'ny Google Maps dia fampiharana mahaliana hahafantarana ny fomba fiasan'ny rafitra mandrindra ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao. Ho an'ity, voafantina amin'ny tontonana izay mampiseho ny Coordinate Systems ny firenena ary avy eo ny ...
Plex.Earth, ohatra tsara amin'ny fidirana amin'ny tsena Hispanika
Androany vao natsangana ny kinova Espaniola ny pejy PlexScape, izay ankoatry ny fanontana voalohany dia nisy ihany koa tamin'ny teny anglisy sy frantsay. Toa fihetsika lehibe iray izany ho anay, izay nahitanay ny mariky ny teo aloha, hatramin'ny Plex.Earth ao anatin'ny fiteny 10 mahery izay efa tafiditra ao amin'ny kinova 2.0.…
Google Earth / Maps, fanavaozana
Telo andro monja hatramin'ny faran'ny taona 2011 dia nahazo alalana aho hampita ireo vaovao roa farafaharatsiny izay hanova ny fiainantsika amin'ny taona 2012: 1. Mividy Bentley Systems i Microsoft. Raha ny re, Microsoft dia nahatratra ny fifanarahana farany hahazoana ny ivon'ny Bentley Systems tratra ao amin'ny Bentley Infrastructure 500; ny Tambatra…
Fotoana vitsy lasa izay dia niresaka momba ny Plex.Earth Tools ho an'ny AutoCAD aho, fitaovana mahaliana izay ankoatry ny fampidirana, ny fangalaran-tsary ny sary ary ny fanaovana nomerika amin'ny endriny, dia afaka manao fomba mahazatra marobe ihany koa ao amin'ny faritra anaovana fanadihadiana. Amin'ity indray mitoraka ity dia te hampiseho ny andiana tsipika contour avy amin'ny Google Earth aho. Angamba ny zava-misy fa ...
Ny Microstation, avy amin'ny kinova 8.9 (XM) dia mitondra andian-java-miasa mifandraika amin'ny Google Earth. Amin'ity tranga ity dia te-hijery ny fanafarana ny maodely telo refy sy ny sariny aho, zavatra mitovy amin'ny ataon'ny AutoCAD Civil 3D. Ireo fiasa ireo dia velomina amin'ny fanaovana: Fitaovana> ara-jeografika na raha Microstation ...